नवराज कुँवर काठमाडाैं, ६ फागुन
गत जनवरीमा बेलायती राजकुमार ह्यारीले पत्नी मेगन (डटिक्स अफ ससिक्स) लाई लिएर बकिङ्घम दरबार छाडे । यो घटनापछि महारानी एलिजावेथले ‘ड्युक एण्ड डटिक्स अफ ससिक्स’ को शाही उपाधि खोस्ने निर्णय गरिन् ।
अहिले ह्यारी पत्नीसहित अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । उनी विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमदेखि क्लब र सपिङ मलमा देखिने गरेका छन् । उनी अब बेलायतका पूर्वयुवराज हुन् र एउटा स्वतन्त्र नागरिकसरह उनले जीवन बिताउनेछन् ।
नेपालमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले नै राजतन्त्र उखुलेर फ्याँक्यो । राजा नै ‘पूर्व’ भइसकेको देशमा पूर्वयुवराजको चर्चा गर्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्ला । तर, हामीकहाँ भएका पूर्वयुवराज पारस शाह चर्चा गर्न लायक केही न केही गतिविधि गरिरहन्छन् ।
उनी अझै राज्यबाट सुविधा र सुरक्षा पाइरहेको परिवारका सदस्य हुन् । त्यसैले यो चर्चा उनको निजी जीवनमा दख्खल दिने खालको नहोला ।
ब्रिटिस प्रिन्स ह्यारीले त राजतन्त्र हुँदाकै बखत राजभोग त्याग गरेर ‘स्वतन्त्र’ हुने निर्णय गरे । उनले अब बकिङ्घमको कुनै सुविधा लिने छैनन् । त्यसैले उनले आलोचनाभन्दा ज्यादा तारिफ पाइरहेका छन् ।
तर, नेपालका पूर्वयुवराज राजतन्त्र फ्याँकेर आएको गणतन्त्रमा स्वतन्त्रताको मज्जा लुटिरहेका छन् । ह्यारीजस्तो पारसले तारिफ होइन, त्योभन्दा धेरै गुणा ज्यादा आलोचना खेप्ने गरेका छन् । पारसका वाञ्छित गतिविधिबाहेकको कुरा गर्ने हो भने गणतन्त्रवादीका लागि यो सुखद् पक्ष हुन सक्छ ।
उनका पिता अर्थात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सोच्दा हुन्, ‘हेरौँ, यो गणतन्त्र कहिलेसम्म टिक्ला ?’ ५ फागुन (सोमबार) साँघु साप्ताहिकले लेखेको छ, ‘दिल्ली पुगेर नेपालमा राजतन्त्र ब्युँताउने अन्तिम प्रयास गर्दै छन् ज्ञानेन्द्र ।’ तर, पारसका लागि यही गणतन्त्र प्यारो छ, यसैमा रमाइरहेका छन् ।
बच्चाबेला मेरा हजुरबुबालाई म सोध्थेँ– हजुरबा राजाको छोराछोरीलाई हामीले हेर्न पाइँदैन ?
हजुरबुबाले मुस्कुराउँदै जवाफ दिनुहुन्थ्यो, ‘बाबु राजाको छोराछोरी दरबारमा बस्छन्, उनीहरू जहाँ पायो त्यहीँ जाँदैनन्, गाडीमा हिँड्छन्, जसले पायो त्यसले हेर्न पाउँदैन ।’
उतिबेला राजा वीरेन्द्र शाह थिए । उनका छोरा दीपेन्द्रलाई पारसलाई जसरी जहाँ पायो, त्यहीँ देख्न पाइँदैन थियो ।
२०५८ सालपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । उनका एक मात्र छोरा पारस युवराज बने । तर, पारस त्यसअघि नै विभिन्न ‘स्क्याण्डल’मा मुछिएका थिए ।
पूर्वयुवराज पारसका विवादित शृङ्खला
पारस ‘बिग्रिएका’ थिए । विभिन्न स्क्याण्डलमा मुछिएकाले उनका शत्रु पनि धेरै थिए । राजतन्त्र समाप्त भएपछि ज्ञानेन्द्रले पारसलाई सुधार्न थाइल्याण्ड पठाए । तर, थाइल्याण्डमा पनि उनी सुध्रिएनन् ।
लागुऔषध मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ परे । यता, श्रीमती छाडेर थाई युवतीसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण पनि उनी आलोचित बने । एकपटक त हृदयाघातका कारण मृत्युको मुखमा पुगेर बाँचे ।
पछि उनी नेपाल आएपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए, ‘मृत्यु जितेर आएका पारसले जीवन बुझे, अब उनी किफायती बन्नेछन् । पूर्वयुवराज भएकाले आफ्ना पिता र राजतन्त्रको समर्थन गर्ने जनताका पक्षमा उभिनेछन् ।’
तर, पारसले सबैलाई चकित पारिदिए । उनका पिता र समर्थकले नरुचाएको यही गणतन्त्रको धुनमा पारस नृत्य गर्न थाले र गरिरहेका छन् । यति मात्रै होइन, उनले कुनै न कुनै ‘उपद्रव’ गरिरहेका हुन्छन् ।
विभिन्न चोक, चौतारा, चिया पसल, डिस्को, रेस्टुरेन्टमा सजिलै भेटिने पारस आफ्ना गतिविधि र अभिव्यक्तिका कारण पनि चर्चामा आउने गर्छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पनि अहिले उनी भाइरल छन् । अलि ‘रफ’ बोल्ने उनलाई हिजोआज ‘राजावादी’ भनेको पनि मन पर्न छाडेको छ ।
२७ असोजमा टिकटकमा एउटा भिडियो भाइरल भयो । जहाँ पारस केही मानिसहरूसँग विवाद गरिरहेका थिए ।
हार्ले डेभिड्सन मोटरसाइकलमा बसेका पारसलाई केही मानिसले भनिरहेका थिए, ‘दाइले भनेको मान्ने मान्छे हो हामी, केही भयो भने अप्ठेरो हुन्छ भनेर यहाँ तपाईंलाई देखेर आएको, हामी पनि राजावादी हो ।’
पारसले उनीहरूको कुरा सुन्नेबित्तिकै जवाफ दिएका थिए, ‘तपाईंले भन्न खोजेको के ? यो वादी हो, त्यो वादी हो नभन्नुस् के, राजावादी भनेको छुट्याउने कुरा भो । हामी नेपाली हो । त्यस्तो कुरा गर्नुस् मसँग ।’
पारसले कड्किँदै भने- यो वादी त्यो वादी हैन, राजावादी पनि नभन्नुस् (भिडियाेसहित)
युट्युबर सोनिका रोकायाले गत ८ डिसेम्बरमा ‘दि सोनिका शाे’मा एउटा भिडियो अपलोड गरिन् । उक्त भिडियो पोखराको फेवातालमा शूट गरिएको थियो । फेवातालको डुंगामा बसेका पारससँग सोनिकाले कुराकानी गर्दै भनेकी छन्, ‘दर्शकहरूले तपाईंलाई हेरिरहेका छन्, यो बेला चुरोट नसल्काइदिनू, ज्ञानी बनिदिनू न !’
पारस जवाफ दिन्छन्, ‘हामी सत्यमा लागेको मान्छेले किन चुरोट सल्काउन हुँदैन ? नस्वीकारेको भए म यहाँ हुन्थे, कुराकानी गरिरहेको हुन्थेँ ?’
उनले के स्वीकार गरेको हो त्योचाहिँ भनेका छैनन् ।
तर, सोनिकाले थपेकी छन्, ‘धन्यवाद हजुरले मलाई स्वीकार्नु भएकोमा, नट इन द्याट वे ।’
आज फेरि पारसका केही तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन्, जहाँ उनी युट्युबर सोनिका रोकायाको जन्मदिन मनाइरहेका देखिन्छन् । हिजो अर्थात्, सोमबार सोनिकाको ‘बर्थ डे सेलिब्रेसन’मा सोनिकाको निकै ‘क्लोज’ देखिएका छन् पारस ।
दरबारमार्गस्थित क्लक टावर एण्ड लन्जमा सोमबार राति पारसले सोनिकाको हातबाट केक खाए भने उनलाई पनि खुवाए । पारस नाचे पनि । उनीहरू दुवैले खादा लगाएकाे देख्न सकिन्छ । तस्वीर स्राेत ः साेनिका राेकायाकाे फेसबुक
त्यसै पनि सोनिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर पारसमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । श्रीमती हिमानी शाह हुँदाहुँदै पारसले सोनिकासँग सम्बन्ध बढाएको उनका धेरै समर्थकलाई ‘हजम’ भइरहेको छैन ।
किनकि पारसकै कारण राजतन्त्रका समर्थकले पनि गणतन्त्रवादीबाट शब्दवाण सहनुपरेको छ । सोनिका रोकायालाई अँगालोमा बाँधेर पारसले खिचेको एउटा तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेर धेरैले टिप्पणी गरेका थिए, ‘हेर तिमीहरूको राजतन्त्र ।’ तस्वीर स्राेत ः सामाजिक सञ्जाल
तर, पारसले यी कुराको मतलब गर्दैनन् । उनले भन्ने गरेका छन्, ‘भन्नेले भन्दै गर्छन् ।’ राजतन्त्रमा भए उनले जवाफ पक्कै दिनुपर्थ्यो ।
आज पारसकी आमा अर्थात् पूर्वरानी कोमल शाहको जन्मदिन हो । राजावादीहरूले आज उनको नाममा दीप जलाउँदै छन् । पारसले के गर्छन्, थाहा छैन । तर, सुनिन्छ परिवारसँग पारसको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन ।
आफ्ना पिता भित्रभित्र राजतन्त्रको पक्षमा माहाैल बनाउँदै जान्छन् तर पारसले फ्याट्ट कुनै हर्कत गरेर त्यसलाई भताभुङ्ग पारिदिन्छन् । र, पारसका गतिविधिले ‘गणतन्त्रका नवराजा’लाई शीतलता प्रदान गर्छ ।
केही दिनअघि पूर्वका एक कट्टर राजवादीसँग भेट भएको थियो । उनी भन्दै थिए, ‘हामी राजा चाहियो भनेर कुर्लिरहेका छौँ, युवराज भने गणतन्त्रमै नाचिरहेका छन् । हामीले उनलाई राजाका रूपमा हेर्न चाहेका थियौँ । उनी गणतन्त्रको साधु बन्नतिर उद्यत देखिन्छन् । पारसकै कारण राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र नै ठीक रहेछ भन्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ ।’
बेलायतमा अझै राजतन्त्र छ । आलंकारिक नै भए पनि त्यहाँको राजपरिवारका सदस्यको ‘हलचल’ले ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसैले ह्यारीको ‘दरबारत्याग’ले विश्वलाई चकित पार्‍यो । नेपालमा अहिले राजतन्त्र ‘मूर्दा’ भइसकेको छ । त्यसैले यहाँको हलचलले खासै अर्थ राख्दैन । यहाँ धेरैलाई चाकित पारेको विषयचाहिँ पूर्वराजपरिवारको सदस्य अर्थात् पूर्वयुवराजले गणतन्त्रको खुलेर मज्जा लुट्नु हो ।
यद्यपि, पारसलाई धेरैको सुझाव छ, ‘गणतन्त्रमा रमाउनु तर पच्ने गरी मात्रै ।’
अन्तिममा पारसकी माता काेमल शाहलाई जन्मदिनकाे शुभकामना पनि ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ६, २०७६, ०३:२६:००